Inkulumo kaMartin Luther King "Nginephupho" - I-AFRIKHEPRI FOUNDATION
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngo-Okthoba 10, 2019
Ngiyanitshela namuhla, bangane bami, nakuba kufanele sibhekane nezinkinga zanamuhla nangomuso, ngisenalo iphupho. Kuyiphupho eligxile ngokujulile ephupheni laseMelika. Nginephupho ngelinye ilanga lesi sizwe sizovuka futhi siphile ngaphansi kwencazelo yangempela yenkolelo yalo: "Sibheka la maqiniso ukuba abonakale, ukuthi wonke umuntu wadalwa alinganayo."
Ngiphupha ukuthi ngolunye usuku, emagqumeni abomvu aseGeorgia, amadodana ezigqila zangaphambili kanye namadodana abengabaphathi bezinceku bazokwazi ukuhlala ndawonye etafuleni lobuzalwane.
Ngiyaphupha ukuthi ngolunye usuku, ngisho nezwe laseMississippi, ugwadule olunzima lokungabi nabulungisa nokucindezelwa, luzoguqulwa libe yi-oasis yenkululeko nobulungiswa.
Nginephupho lokuthi izingane zami ezine ezincane zizohlala ngelinye ilanga esizweni lapho zingeke zihlulelwe khona ngombala wesikhumba sabo, kodwa ngokuqukethwe komuntu wazo. Ngiphupha namuhla!
Nginephupho ngelinye ilanga e-Alabama, ne-racists yalo enobudlova, kanye nombusi walo enezindebe ezishaya ngamagama athi "ukuhoxisa" nokukhishwa "; Ngolunye usuku ekujuleni kwe-Alabama, abafana abancane abamnyama namantombazane amancane amnyama bangajoyina izandla zabo nabafana abancane abamhlophe namantombazane amancane amhlophe, njengabafowabo nodadewethu.
Ngiphupha ukuthi ngolunye usuku zonke izigodi zizokhazinyuliswa, zonke izintaba nentaba ziyokwakhiwa, izindawo ezimbi zizophendulwa zibe yizintabeni, izindawo ezihlukumezayo ziyoqondiswa, inkazimulo yeNkosi izokwembulwa futhi bonke abaphilayo bheka konke lokhu ndawonye.
Usuke usabela "Inkulumo kaMartin Luther King" Nginephupho "" Imizuzwana embalwa edlule